Ụlọ ọrụ ngwa ngwa, ndị na -ebunye ya - Ndị na -emepụta ngwa ngwa China
Fastener bụ aha izugbe nke ụdị akụkụ igwe eji arụ ọrụ na ijikọ ma jikọọ akụkụ abụọ ma ọ bụ karịa (ma ọ bụ ngwa) n'ozuzu ya. A makwaara ya dị ka akụkụ ọkọlọtọ n'ahịa. Ọ na -agụnyekarị ụdị akụkụ iri na abụọ na -esote: Bolts, studs, kposara, mkpụrụ, kposara onwe gị, kposara osisi, washer, mgbanaka njigide, atụdo, rivets, mgbakọ na njikọ abụọ, mbọ ịgbado ọkụ. (1) Kpọchie: ụdị ihe nkedo nke nwere isi na kposara (cylinder nwere eriri mpụga), nke kwesịrị ka ya na w ...
Ọrụ nhazi ngwa ngwa OEM ODM
Bolt na -ejikọ maka nhazi nchara bụ ụzọ njikọ nke na -ejikọ ihe karịrị akụkụ abụọ nke ihe nchara ma ọ bụ ihe n'ime otu. Njikọ Bolt bụ ụzọ njikọ kachasị mfe na nchịkọta ọgbakọ na nrụnye nhazi. Njikọ njikọta bụ nke izizi ejiri rụọ nrụnye igwe. N'ọgwụgwụ afọ 1930, ejiri njikọ rivet dochie njikọ bolt, nke ejiri ya mee ihe naanị ka ọ bụrụ ihe nrụzi nwa oge na mgbakọ ihe. Nnukwu bolt jikọọ ...
Ogo arụmọrụ bolt nwere akụkụ abụọ nke ọnụọgụ, nke na -anọchite anya ike nkwụsị nke ọnụ ọnụ brọtị na oke nke ihe. Dịka ọmụmaatụ, ihe bolts nwere ọkwa arụmọrụ 4.6 bụ: ọnụọgụ dị na akụkụ nke mbụ (4 n'ime 4.6) bụ 1/100 nke ike ọdụdụ (n / mm2) nke ihe mkpọchi, ya bụ, Fu ≥ 400N / mm2; Ọnụ ọgụgụ dị n'akụkụ nke abụọ (6 n'ime 4.6) bụ ugboro iri nke oke mkpụrụ nke ihe bolt, ya bụ, FY / Fu = 0.6; Ngwaahịa ...
Otu nkwụsị ọrụ maka ihe nkedo
A na -eji eri eme ihe n'ọtụtụ ebe, site n'ụgbọ elu na ụgbọ ala ruo ọkpọkọ mmiri na gas nke a na -eji na ndụ anyị kwa ụbọchị. N'ọtụtụ oge, ọtụtụ eri na -arụ ọrụ nke ijikọ njikọ, na -esote nnyefe ike na ngagharị. Enwekwara ụfọdụ eri maka ebumnuche pụrụ iche. Ọ bụ ezie na e nwere ọtụtụ ụdị, ọnụ ọgụgụ ha nwere oke. Iji eri eri ogologo oge bụ n'ihi usoro ya dị mfe, arụmọrụ a pụrụ ịdabere na ya, mwepụ dị mfe na nrụpụta dị mfe, nke na-eme ka ọ bụrụ ihe nrụpụta dị oke mkpa ...
Ngwaahịa apụta, Map saịtị, Ihe nkedo, Mmiri Efere, Akụkụ stampụ nke nnukwu, Aluminum CNC Machined Parts, Mpempe akwụkwọ ọla zọ ngwaahịa, Ọnwụ nkedo Magnesium, Ngwaahịa niile